महादेवको तेस्रो आँखा देख्ने बितिकै ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस सधै फलि फाप हुनेछ – Khabar Patrika Np
महादेवको तेस्रो आँखा देख्ने बितिकै ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस सधै फलि फाप हुनेछ
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण २४, २०७७ समय: २१:२९:३८
काठमाडौँ। हिन्दु धर्ममा उल्लेख भएअनुसार महादेवलाई त्रीमूर्तीदेवको रुपमा पनि चिनिने गरिन्छ । महादेवको तेस्रो आँखालाई शक्तिको रुपमा लिइएको छ । जब भगवान शिव रिसाउँछन् त्यतिबेला आफ्नो तेस्रो आँखा खोलेर दोषिलाई सजाय दिने गरेको विश्वास रहेको छ । उनको तेस्रो आँखाकै कारणले गर्दा । भगवान शिवलाई ‘संहारिकर्ता’ भनिएको हुन सक्ने धेरैले अनुमान लगाएका छन् । अध्यात्मवादको अनुसार तेस्रो आँखा भन्ने बित्तिकै ज्ञानको आँखा भन्ने गरिएको छ । मानिसलाई थाहा नहुन सक्छ मान्छेको पनि तेस्रो आँखा रहेको हुन्छ । तर शिवजीको जस्तो बिनासकारी आँखा भने होइन् । जब मानिसले तेस्रो आँखाले हेर्छौ ।
त्यतिबेला मानिसले प्राकृतिक तथा संसारको सत्यतालाई बुझ्न सक्छन् । शिवजीको तेस्रो आँखालाई ज्ञानको आँखाको रुपमा पनि हेर्ने गरिएको छ । शिवजीको तेस्रो आँखालाई ज्ञानको आँखा भनिन्छ भने अन्य दुई आँखाले भौतिक गतिविधिलाई जनाउँछ ।
सर्पको एक्सरे गर्दा दुईटा टाउको भने नजोडिएको देखिएको थियो । एउटै टाउकोमा रहेका तीन वटै आँखा देख्न सक्ने थियो । सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं!!! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ। त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शेयर गर्नुहोस ।७ दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला !!! ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ